खेदिँदै गरेकाे अस्तित्व :: Setopati
खेदिँदै गरेकाे अस्तित्व
हाम्राे समाज अनि देशमा हरेक चिज बदलियाे तर साेच बदलिन सकेन।विकासका कयाैँ पुर्वाधारहरू भित्रिए पनि अफसाेच त्यसकाे सहि सदुपयाेग गर्ने साेचकाे कमिले गर्दा देशकाे अवस्था झनै नाजुक हुँदै गएकाे छ।अहिले नेपालकाे अवस्था एक वृद्दाश्रम र बालगृह भन्दा फरक नपर्ने अवस्थामा पुगेकाे छ।सक्षम र सवल युवा पुस्ताहरु सबै विश्वका हरेक कुनाकाप्चाहरूमा आफ्नाे भविष्य खाेज्न विवश छन्।हरेक कामकाे सम्मान साथै हरेक प्ररिश्रमकाे राम्राे मुल्यांकन हुनु नै यी देशहरुकाे मुख्य आकर्षणकाे बिषय हाे।कास,ति संघर्षका पसिनाहरु हाम्रै देशकाे कुनै बारिका पाटाहरूमा लगानी गर्न सक्थ्याै त हाम्राे देश सिंगापुर भन्दा धेरै बिकसित हुने थियाे।पानिकाे मुहान समेत आफ्नै नभएकाे सिंगापुरकाे ५० वर्षे विकसित रुप हेराैँ त दुनिँया त्यहिँ झुल्छन्।
मरुभूमि (कतार,दुबई,मलेशिया,कुवेत,हङकङ आदि)लाई विश्व कै प्रख्यात पर्यटकिय देशमा परिणत गर्ने हाम्रै नेपालि दाजुभाइहरु हुन भन्दा तपाई पत्याउनु हुन्छ नि? तर,हामी नेपालिले हाम्राे देशकाे हालत हेर्ने कहिले? अब यसैमा कुरा गराै वैदेशिक राेजगारमा महिला। हाे, हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हाे र यथार्थतालाई पनि स्विकार्न सक्नु पर्छ। महिला पुरुषकाे दाजाेमा शारिरिक हिसाबले कमजाेर हुन्छन्।तर मानसिक रुपमा सबल र सक्षम हुने गर्छन्।यिनै सबल र सक्षमपनलाई याे समाजले कहिले नियाल्ने त? अवसरकाे खाेजिमा छिमेकि राष्ट्र हुदै विदेशिएका कयाैँ महिलाहरु आ-आफ्नै वेदना,घटना लिएर स्वदेश फर्किन्छन भने कसैले अकाल मै ज्यान गुमाउन पुगेका पनि छन्।
पुरुषलाई सहज तरिकाले राेजगारकाे अवसर भनि विभिन्न कागजी प्रक्रियाहरु पुरा गरी नेपालबाटै स-सम्मान जाने आउने प्रावधान मिलाउन सक्ने तपाई नेपाल सरकार महिलाका लागि कहिले?
समान अधिकारकाे बिगुल फुकेकाे पनि त जुगाै भईसक्याे नि हैन र? हरेक समाजमा नारी कै चरित्रमा खेलबाट गरिन्छ। उसकै चरित्रमा प्रश्न चिन्ह लगाईन्छ।के याे समाज नारी कै चरित्रमा अडिक छ हाे? नारी चरित्र माथि उठ्ने प्रश्न चिन्ह पुरुष चरित्रमा उठ्छ कहिले र कसले उठाउने? नारी भित्रकाे महानता र उसकाे पवित्रताकाे सम्मान गर्ने कहिले र कसले? समाजमा इज्जत मर्ला भन्ने त्रासले आफ्नै सन्तानकाे खुशी बलि चढाउन बाध्य हुन्छन्र अभिभावकहरु।मलाई लाग्छ जब सम्म हाम्राे देश जातपातकाे खाेजि गरिन्छ तब सम्म विकास सम्भव देखिँदैन।
मानवता र सामाजिक भावनाकाे कमि भएकाे हाम्राे समाज महिला र पुरुष एकअर्काका परिपुरक हुन् भनि बुझ्ने कहिले? विभिन्न बाहानामा महिलामाथि गरिने हिंसाहरुकाे अन्त्य हुन्छ कहिले? के पुरुष भन्दैमा दाेस्राे,तेस्राे दुलही भित्र्याउन पाइन्छ? अनि ती महिला मान्छे नै हैनन् र? तपाईकाे जस्ताे रहर,सपना,लक्ष ती महिलाकाे हुन्न र? हाे हिजाे आज पुरुष वर्ग पनि महिला पीडित हुँदै गएकाे खबर हामीले पढिरहेका छाैँ र सुनिरहेका पनि छाैँ।याे किन हुदैछ थाहा छ? जब सबल र सक्षम नारी प्रतिकारमा उत्रिन्छन् तब यस्ताे अवस्था सृजना हुन्छ जस्ताे मलाई लाग्छ। तर,यी समस्याहरुकाे समाधानका उपायहरु पनि छन्।सम्बन्धकाे अस्तित्व,महिला पुरुष एकअर्काकाे परिपुरक हाै भन्ने भावनाको विकास साथै जुन सम्बन्धमा तपाई हुनुहुन्छ महिला हाै या पुरुष,सम्बन्ध पहिलाे,दाेस्राे,तेस्राे जुन सुकै हाेस एक अर्का प्रति सम्मान,माया ममता र साथै हुनुकाे अर्थ लाग्दैन भने त्याे सम्बन्ध ताेडेकै राम्राे। जिन्दगी आफू खुशसी भएर बाँच्न सके पाे अरूलाई पनि खुशी दिन सकिन्छ त।हैन र...?
साँच्चै समाज सँगै देश हरेक क्षेत्रबाट परिवर्तन हुन चाहान्छ।याे सम्भव छ त केवल एकता र परिवर्तित साेचकाे।के सक्नुहुन्छ?
अन्नपूर्ण गाउपालिका-३ कास्की
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस ३, २०७४, २१:०१:४५